नेपालको कानुन, जनताले जानुन् - सार्वजनिक व्यवहार सुधार ऐन २०३३ मा के छ?
नेपालको कानुन, जनताले जानुन् – मैले कानुन किन बुझ्नु पर्छ?
संपादक, नयाँ प्रहर
कानुन बुझेमा कानुन पालना गर्न सकिन्छ, पालना गराउन सकिन्छ। तर नेपालमा भने आज सम्म पनि ‘नेपालको कानुन, इश्वरले जानुन्’ भन्ने उखान प्रचलित छ। नहोस् पनि किन, जनतालाई कानुनको बारेमा बुझाउने कार्यमा खासै ठोस कदम सरकारले चालेको पनि देखिदैन।
जब तपाइँलाई कानुनको ज्ञान हुँदैन तब तपाइँले धेरै कुरामा दुख पाउन सक्नुहुन्छ। के-कस्ता दुख पाइन्छन कानुन नबुझ्दा:
कानुन विपरित काम हुन गई सजाय भोग्नु पर्ने हुन सक्छ
तपाइँले कानुन बुझे पनि नबुझे पनि कानुन कार्यान्वयन भइरहेको नै छ। तपाइले गरिरहनु भएको काम/कुरा गैर-कानुनी हुन सक्छ। कसैले यस संबन्धमा उजुरी दिएमा वा सरकारी निकायको नजरमा परेमा तपाइँ माथि कानुनी कारवाही हुन सक्छ।
ठगिने/झुक्काइने संभावना हुन्छ
तपाइले कतै सुन्नु भएको होला नि वकिल देखि प्रहरी पनि डराउछन्। यसको मतलब साच्चै असल प्रहरी अधिकारी डराउँछन् वा डराउनु पर्छ भन्ने होइन, बरु कानुनको ज्ञानले वकिललाई शक्तिशाली बनाएको हुन्छ भन्ने हो।
तपाइँलाई कानुनको राम्रो ज्ञान छ भने तपाइँलाई आफुले गरेको काम कानुनी रुपमा वैध हो की अवैध हो भन्ने स्पष्ट जानकारी हुन्छ। त्यसैले, कसैले पनि तपाइलाई कानुनको नाममा ठग्न वा झुक्याउन सक्दैन।
सरकारी झमेलामा पर्नु पर्ने हुन सक्छ
मेरो अनुभवले भन्छ की यदि कुनै सरकारी कर्मचारीलाई तपाइँको काम गर्न झन्झट लागेको छ भने ‘यो काम गर्न मिल्दैन’ भन्छन्। तपाइँले पत्याउनु हुन्छ र त्यो काम त्यसै रोकिन्छ। तर यदी तपाइलाई कानुनको राम्रो ज्ञान छ भने ‘यो काम किन गर्न नमिल्ने, यस्तो व्यवस्था पनि छ नि’ भनेर सोध्न सक्नुहुन्छ। तपाईले कानुन देखाउनु भएपछी तपाईसँग अनावश्यक वहस गर्न खोज्दैनन्, र तपाइको लगभग नहुने अवस्थामा पुगेको काम सहजै हुन्छ।
कानुनी सुरक्षाबाट बन्चित हुन सकिन्छ
कानुन नागरिक अधिकारलाई सुरक्षित पार्न नै बनाइएको हो। कानुनका धेरै प्रावधानहरूले तपाइलाई गाह्रो-सारो पर्दा सहयोग गर्न नै बनाएको हुन्छ। तर यसको लागि तपाईले ति कानुनी प्रावधानहरु बुझ्नु पर्ने हुन्छ। बुझ्नु भएन भने तपाइले कानुनी सुरक्षाको लागि प्रक्रिया अगाडी बढाउन सक्नुहुन्न।
नेपालमा धेरैले सरकारले आफुलाई नहेरेको गुनासो गर्छन्। तर खासमा कानुनी ज्ञानको अभावको कारण सरकारबाट कानुनी सुरक्षा लिनको लागि पहल गर्न नसकेर चै धेरैले दुख पाएका हुन्छन्।
नागरिक जिम्मेवारी पुरा गर्न चुक्नुहुन्छ
कतै गैर-कानुनी काम भएको छ वा अपराध भएको छ भने त्यसको जानकारी सरकारी निकायलाई दिनु तपाइको नागरिक जिम्मेवारी हो। यसो गर्दा तपाइले अपराध नियन्त्रणमा सरकारलाई मद्दत गर्नुहुन्छ। तर, के कुरा कसरी अपराध हो, यस्तो अपराधको बारेमा कहाँ सूचना दिने भन्ने जानकारी तपाइँसँग हुन तपाइले कानुन बुझ्नु जरुरी हुन्छ।
कानुन बुझ्न कानुन पढ्नु जरुरी हुन्छ। थुप्रै ऐनहरु छन् जसलाई तपाइले एक पटक पढ्नु भयो भने पनि सजिलै बुझ्नुहुन्छ। कहाँ उपलब्ध हुन्छन् त यी ऐनहरू?
कहाँबाट पढ्ने कानुन?
कानुन पढ्न ‘ल क्याम्पस’ नै जानु पर्छ भन्ने छैन। यदी तपाइँ यो लेख पढ्दै हुनुहुन्छ भने निश्चित छ कि तपाइँसँग इन्टरनेटको पहुँच छ। इन्टरनेट छ भने सबै ऐनहरु तपाइले सजिलै डाउनलोड गरेर पढ्न सक्नुहुन्छ।
कानुन आयोगको वेबसाइटमा सबै ऐनहरु, अध्यादेशहरु, अन्तर्राष्ट्रिय सन्धी/महासन्धीहरु, नियमहरु, गठन आदेशहरु तथा नितिहरु उपलब्ध छन्। तपाइले यस वेबसाइट मार्फत आवश्यक ऐन डाउनलोड गरी पढ्न सक्नुहुन्छ।
नेपाल कानुन आयोगको वेबसाइटको लिंक: www.lawcommission.gov.np
यस लेखसँगै नियमित रुपमा कानुनी विषयमा लेखहरूको स्तम्भ सुरु गर्दै छौं। केही प्रतिक्रिया छन् भने तलको कमेन्ट बक्समा आफ्नो प्रतिक्रिया अवश्य पेस गर्नुहोस्।
← समृद्धिको स्वर्णिम मोडल जलविद्युत उत्पादन
बच्चाहरूको प्रकृति बुझौं, प्राकृतिक रुपमा नै हुर्काऔं →